भट सोया दूध संग - Thermomix रेसिपी | ThermoRecines
मलाई धेरै भन्दा धेरै मन पर्छ सोया दुध!, मेरो ससुरालीहरूले यसलाई लामो समयदेखि लिइरहेका छन् र मेरो छोरीहरूलाई यो मनपर्दछ।
यो धेरै स्वस्थ छ, यसमा सम्पूर्ण गाईको दुधको आधा फ्याट छ, जुन डाइटिंगको लागि उपयुक्त छ र कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने मैले यसका विशेषताहरुको लिंक राखें। सोया दूध.
मान्छे ल्याक्टोज असहिष्णु र शाकाहारी उनीहरूले यो दुध खान्छन् जुन भिटामिनको ठूलो योगदान रहेको छ।
El खिर यो एक मिठाइ हो जुन मलाई सबैभन्दा मनपर्दछ र मलाई लाग्यो कि सोया दूधको साथ यसको राम्रो स्वाद छैन। खैर म गलत थियो! यो स्वादिष्ट छ एसिड टेस्ट मेरो ससुराले यो प्रयास गर्दा भएको थियो, यो उनको मनपर्ने मिठाई हो र जब मैले यसलाई सोया दूधले बनाएको छु भने, उनी एकदम राम्रो देखिएन। यो प्रयास गर्ने बित्तिकै, उसले आफ्नो सोच बदल्छ र त्यो पहिचान गर्दछ यो धेरै धनी छ।
को किशमिश तिनीहरूले यसलाई अझ राम्रो स्वाद बनाउँदछन्, तर तिनीहरू वैकल्पिक हुन्। सत्य यो हो कि म तिनीहरूलाई धेरै मन पराउँछु, तर तिनीहरूलाई फाल्न आवश्यक छैन।
1 भट सोया दूध संग
सोया दूध संग बनाइएको एक क्लासिक नुस्खा।
२०० ग्राम सोया दूध
कागतीको बोक्रा (म केवल कुनै सेतो छाला बिना मात्र टुक्रा लिन्छु)
२० ग्राम किसमिस (वैकल्पिक)
हामी पुतली ब्लेडमा राख्छौं र चामल, दूध, दालचिनी स्टिक र निम्बूको बोक्रा थप्दछौं।
हामी प्रोग्राम १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।।
हामी चिनी र कार्यक्रम थप्छौं १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।।
हामी ब्लेड, कागतीको बोक्रा र दालचीनी स्टिकहरूबाट पुतली हटाउँछौं।
हामी कटोराहरू वितरण गर्छौं र यसलाई चिसो गरौं।
हामीले तिनीहरूलाई फ्रिजमा राख्यौं र तिनीहरूलाई कम्तिमा तीन घण्टाको लागि चिसो गरौं।
माथि केही किसमिसको साथ सेवा गर्नुहोस् र भुमिको दालचिनीको साथ छर्कनुहोस्।
थप जानकारी -चामल पुडिंग
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, Postres
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » Postres » भट सोया दूध संग
मलाई मनपर्दछ कि तपाईंले यो नुस्खा राख्नुभएको छ ... मँको एक मामा भाइ हुँ जो शाकाहारी छन्, र उनले यो अवसरमा गरेकी छ, र सत्य यो हो कि यो स्वादिष्ट छ, मैले कल्पना गरेको भन्दा धेरै ... म कम र कम गाईको दुध पिउँछु। , र धेरै सोया, त्यसैले तपाईं मलाई यी सामग्रीहरू प्रतिस्थापन गरेर यो गर्न प्रोत्साहित गर्नुभयो। धन्यवाद।
जुआनफ्रालाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई आशा छ तपाईलाई यो मनपर्‍यो, जुआन्फ्रा! तपाईंले मलाई भन्नुहुनेछ। चुम्बनहरू।
मलाई आज बिहान यो नुस्खाको साथ कस्तो अचम्म लाग्यो!
एलिना हेर, मैले केहि बर्षे शल्य चिकित्सा रजोनिवृत्ति गरेको थिएँ, र यो नुस्खा मलाई अचम्मैलाग्दो सूट गर्दछ। एउटा प्रश्न, के म मिठाईको लागि चिनी बदल्न सक्छु? तपाईलाई थाहा छ, डाइट। यति कति हुन्छ? धन्यवाद। अभिवादन।
हाई मारिया, मँ खुशी छु तपाईलाई यो नुस्खा मनपर्‍यो। हो, तपाईं मिठाईको लागि चिनी प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ र रकमको लागि, स्वीटनर बक्समा आउने समानताहरू हेर्नुहोस्। शुभकामना।
ठिकै छ, मैले यसलाई लिन कोसिस गरें तर मैले धेरै ब्रान्डहरू प्रयास गरें र मैले कुनै पनि मनपराएन ... के तपाईं कुनै सिफारिस गर्नुहुन्छ? धन्यवाद!
हामीलाई घरमा चामलको खीर मन पर्छ।
पिलुका, मलाई पनि त्यस्तै भयो, स्वाद मलाई धेरै उपयुक्त छैन तर पछि मैले डेनोन ब्रान्डको प्रयास गरेको छु र म यसलाई मेरो सामान्य गाईको दुधसँग मिसाउँछु, र म यसलाई केही हप्तामा मनपर्दछु, म यसलाई पिउनेछु। यसलाई नमिसाईकन। त्यो मेरो कोलेस्ट्रॉलको लागि धेरै राम्रो छ।
मलाई सोया दुध पनि मन परेन, अब म एउटा जैविक चावल र सोफी पेय पिएकी छु अलदीको, जुन राम्रो स्वादको छ, वास्तवमा मलाई पनि मन पर्छ।
Silviar लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते पिलुका, मलाई Pascual द्वारा "Vivesoy" मन पर्छ। मलाई आशा छ तपाईलाई यो चामल मनपर्छ, तपाईले मलाई बताउनुहुनेछ। शुभकामना।
मलाई मनपर्दछ कि तपाईंले यो नुस्खा राख्नुभयो!
के तपाईसँग सोया दूधको लागि कुनै नुस्खा छ? मसँग धेरै नै भएको मलाई मन पर्दैन।
नमस्ते लोलिना, मँ खुशी छु कि तपाईलाई यो मन पर्यो। सत्य यो हो कि मसँग सोया दूधको लागि नुस्खा छैन, तर म यसलाई फेला पार्न प्रयास गर्नेछु। शुभकामना।
कायेतानो काचा भन्यो
हामीले बनाएको फ्राईड दुध महान बनेको छ र राम्रो कुरा भनेको यसलाई बनाउन कत्ति थोरै हुन्छ।
हामीलाई के मन पर्छ त्यो चामलको सूप अति उत्तम छ
CAYETANO CACHO लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खुसी लागेको छ कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो, कायेटोनो! शुभकामना।
म यसलाई सामान्यतया सोया दूध र खैरो चामलको साथ बनाउँछु, यो उत्कृष्ट छ र यसमा थोरै क्यालोरीहरू पनि छन्, म मेक्सिकन हुँ र मेक्सिकोमा यो किशमिश वा नरिवल राख्नु सामान्य छ र यो दालचिनी बाहेक ठूलो स्वाद पनि छ, यो अर्को विकल्प पनि हो। यो खाऊ, साथै मैले फ्रुक्टोजको लागि चिनी प्रतिस्थापित गरेको छु र यो राम्रो छ तर सत्य चिनीको साथ उत्तम छ।
यदि तपाइँ यसलाई क्रीमियर बनाउन चाहानुहुन्छ भने, म आदर्श दुधको एक डिब्बा राख्छु र म गाईको दुधको समान मात्रा हटाउँछु।
कस्तो राम्रो, Carmen! म यसलाई प्रयास गर्छु, यो निश्चित स्वादिष्ट छ। अभिवादन र म तिमीलाई धेरै टाढाबाट देख्न पाउँदा खुसी छु!
म आज राती यो गर्न जाँदैछु, भोलि यो राम्रो हुनु पर्छ, हैन? भोली मसँग पाहुनाहरू छन्, यी परिमाणमा यो people व्यक्तिको लागि बाहिर जान्छ ??
अर्को प्रश्न, शुक्रबार मैले मेरो छोराको स्कूलको लागि केक बनाउन पर्छ, त्यहाँ २ children जना बच्चाहरू छन्, म केक बनाउन सक्छु? मैले जेनोव वा कमिला केक बनाउने सोचें। धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईंलाई पछि भेट्दछौं। लामो थर्मोमिक्स बाँच्नुहोस्!
हाई मार्गा, म आशा गर्दछु तपाईंलाई यो मनपर्‍यो। भोली यो उत्तम हुनेछ र नुस्खा -4-। व्यक्तिको लागि हो। स्पंज केकको सन्दर्भमा, बच्चाहरूको लागि म कमिलाहरूसँग एक जनालाई माया गर्छु, कोला काओ र सुन्तलाको साथ। तपाईं पक्कै तिनीहरूलाई कुनै पनि मनपर्नेछ। शुभकामना।
मलाई सबैभन्दा मन पराउने सान्तेवेरीबाट आएको प्रोवामेल हो, तर त्यहाँ केही ब्रान्डहरू छन् जसमा भनिलाको टचहरू छन् जुन पनि धेरै राम्रा छन्।
मैले यो प्रयास गरेको छैन! अर्को दिन मैले यो किनेँ, मैले सँधै भिवेसो डे पासकुल लिएको छु। धेरै धेरै धन्यवाद, जुआन्फ्रा!
मैले कागतीको खोर्सानीमा चामल बनाएको छु र धेरै तीतो पनि
नमस्ते जुआन, निम्बूको निम्तीको पिलिन कुनै सेतो भाग बिना जानु पर्छ। तपाईं कम मात्रा वा सुन्तलाको बोक्राको टुक्रा थप्न सक्नुहुन्छ। शुभकामना। (मैले यो व्यंजनमा परिमार्जन गरेको छु, जुन एक टुक्राको साथ पर्याप्त छ, धेरै धेरै धन्यवाद!)
टोर्रीजास संग फ्यान्टास्टिक, फ्राइड गरिएको दुध, क्विन्ज क्रोकेट र अब भात सोया दूधको साथ, म यस प्रकारका व्यंजनहरूमा सफल हुँदैछु। अधिक, अधिक अधिक, फा हाहा द्वारा।
म धेरै खुसी छु, जॉर्ज!
म धेरै वर्षदेखि यसलाई मन पराउँछु म सोया दुध पिएको छु र म यसलाई डेसर्टमा पनि प्रयोग गर्दछु र यो सानो चामल मेरो लागि ठूलो छ, जुन मैले पिएकी छु अलप्रो डे ला अस्टुरियाना
चुम्बन र एक धेरै राम्रो नुस्खा
धेरै धेरै धन्यबाद, मर्सिडीज! मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। चुम्बन
ल। धेरै धेरै धन्यवाद। म यो गर्न कोसिस गर्नेछु
नमस्कार, एउटा प्रश्न, के म यो नुस्खा बनाउन सक्छु तर सोया दूधको सट्टा अर्ध-स्किम्ड दुध राख्नु हुन्छ? यस अवस्थामा, के यो समान रकम, १ लिटर हुनेछ?
हामीलाई यति धेरै रेसिपीहरू दिएकोमा धन्यबाद।
मैले त्यो भट्टीमा देखेको छु र यो एकदम राम्रो देखिन्छ, म मार मेनोरमा बस्दछु, र यसलाई कहिले पनि बनाएको थिएन, तर मेरो सासुले यो एचटीको साथ बनाउँदछन् र यो धेरै स्वादिष्ट बाहिर आउँदछ। बधाई छ !! चुम्बन
नमस्ते रोजा, यदि तपाईं अर्ध-स्किम्ड दूध प्रयोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले "दूधसँग चामल" को नुस्खा बनाउनु राम्रो हुन्छ। मैले लिङ्क राखें: http://www.thermorecetas.com/2010/03/29/Receta-Thermomix-Arroz-con-leche/
यो नुस्खा पूरै दुधको साथ हो तर अर्ध-स्किम्ड दुधको साथ पनि यसले राम्रो काम गर्दछ। तपाईं कसरी मलाई बताउनुहुन्छ।
मर्सियन काउल्ड्रोन चलाएर हेर्नुहोस्, तपाई कति रमाईलो हुनुहुनेछ शुभकामना।
धन्यबाद धेरै धेरैssssssssss !!!! म तपाइँको व्यञ्जनहरू लामो समयको लागि बनाउँदैछु, र ती सबै शानदार छन्। म years बर्षदेखि ल्याक्टोज पचाउन नसक्ने भैरहेको छु, र यद्यपि म ल्याक्टोज-मुक्त दुधले धानको पुडिंग बनाउँछु, तर थोरै मात्र पाउन सक्छु। अब म यसको लागि बनाउनेछु। म सोया दूधको साथ प्रयास गर्ने हिम्मत गरिन। मसँग सोया दूधको विशेष ब्रान्ड छैन, म भिन्न हुन्छु। मलाई सबैभन्दा मन पर्ने डानोनकी साभिया हो, प्रोभेमेलबाट क्याल्सिमेल पनि राम्रो छ, तर म भिन्न हुन मन पराउँछु, लिडलमा उनीहरूले पनि बेच्छन्, यो स्वादको कुरा हो। मलाई लाग्छ मैले Aldi मात्र प्रयोग गर्नु पर्छ। यौगर्टहरू बनाउनको लागि उत्तम क्याल्सिमेल हो। फिगरेसबाट धेरै चुम्बनहरू। माइट
हामीलाई हेर्नको लागि धेरै धन्यबाद, माइटे! र मँ धेरै खुशी छु कि तपाईलाई यो नुस्खा मनपर्‍यो। चुम्बनहरू।
नमस्कार, मैले आइतवारलाई रेसिपी बनाएँ र यो तथ्यको फाइदा उठाउँदै कि यो मदर्स डे हो जुन मैले मेरो प्रयासको लागि दिएको थिएँ ... एक सफल !! मेरो छोरा जो सामान्यतया धेरै चीजहरु को लागी कोशिश गर्दैन, उहाँ यो प्रेम गर्नुभयो !! धन्यबाद
म धेरै खुसी छु, रोजा! सत्य यो हो कि यो धेरै धनी छ र हल्का छ। शुभकामना।
नमस्ते! मसँग एउटा प्रश्न छ ... यदि मैले आधा सामग्रीहरू बनाउँछु, के मैले समान समय राख्नु पर्छ? वा मैले यसलाई घटाउनु पर्छ?
नोरालाई जवाफ दिनुहोस्
ब्रोकोली र सूखे टमाटर संग पास्ता